धेरै मानिसहरू गतिशील आईपी कसरी बनाउने रुचि राख्नुहुन्छ। यो आईपी ठेगाना धेरै लाभ छ। विशेष, यो तपाईंले केही वेबसाइट र फोरम मा प्रतिबन्ध हटाउन अनुमति दिन्छ। साथै, यस्तो संख्या को मालिक लगभग अदृश्य जडित रहन सक्छ। एक स्थिर ठेगाना काम गर्नेहरूलाई, एक निशान छोड। आफ्नो व्यक्तिगत नम्बर अनुसार गणना गर्न सकिन्छ, तिनीहरूले के के साइटहरु उनीहरूले भ्रमण र। एक गतिशील ठेगाना काम गर्नेहरूलाई तिनीहरूको संख्या स्थिर छैन, किनभने यस्तो इतिहास छैन। यो अलग प्रत्येक सत्रको लागि बाहिर खडा।
एक गतिशील आईपी ठेगाना, प्रदायकको यो परिवर्तन गर्न सजिलो तरिका हो। त्यहाँ पूर्वनिर्धारित एक गतिशील ठेगाना नबुझाउन कि केही यौगिकों छन्। तपाईं अन्य हालतमा ठेगाना परिवर्तन गर्नु अघि, यसलाई के आईपी र के को लागि हो बुझ्न आवश्यक छ। आईपी ठेगाना सामान्य ठेगाना मानव Habitation तुलना गर्न सकिन्छ। सही व्यक्ति पत्ता लगाउन, तपाईं शहर, घर, घर र अपार्टमेन्ट नम्बर परिभाषित गर्न चाहन्छु। एउटै ठेगाना दुई छन् भने, त्रुटिहरू उत्पन्न र भ्रम। त्यसैले, प्रत्येक ठेगाना अद्वितीय हुनुपर्छ। सबै सामान्य ठेगाना IP ठेगाना को साँचो भने गरिएको छ। उहाँले पनि अद्वितीय हुनुपर्छ।
तर, गतिशील नम्बर त कसरी देखा प्राकृतिक प्रश्न, उठ्छ। सबै धेरै सरल। अद्वितीय ठेगाना हालको समयमा नेटवर्कमा छ मात्र कम्प्युटर हुन भन्ने तथ्यलाई। तसर्थ, कम्प्युटर को ठेगाना को गतिशील परिवर्तन गर्दा निःशुल्क कोठा दिइएको छ। यो अवस्था गतिशील आईपी कसरी बनाउने एक विचार दिन्छ। यो प्रक्रिया बुझ्न मात्र रहनेछ। खैर, केही गतिशील आईपी स्थिर बनाउन कसरी सोच छन्। प्रदायकहरूको को एक विकल्प - सजिलो तरिका तपाईं गतिशील स्थिर परिवर्तन हुँदा नै छ। केही प्रदायकहरू स्थिर ठेगाना लागि विशेष दर आवंटित, त्यसैले तपाईं मात्र एक इच्छित दर टिप्न गर्न आवश्यक छ।
भनेर गतिशील आईपी बनाउन अनुमति प्रविधिहरू, anonymizers भनिन्छ। एक यस्तो सेवा, यो 2ip प्रदान गर्न सक्ने सेवाहरूको। स्पष्ट कारण आफ्नो नाम Anonymizer। सबै पछि, आईपी गतिशील बनाउन कसरी रुचि छ जो एक व्यक्ति, सम्भवत भ्रमण छन् भनेर साइटहरूमा अज्ञात हुन चाहन्छ। सेवा मा 2ip, तपाईं कुनै पनि देश IP प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधाजनक र सजिलो छ। प्रयोगकर्ता वर्तमान छैन लागि कुनै प्रतिबन्ध छन्। साइट 2ip पनि आफ्नो कम्प्युटर बारे रोचक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रयोगकर्ता आईपी, यसको प्रदायक, क्षेत्र र पनि ब्राउजरको हालको ठेगाना प्रर्दशन गर्दछ। यहाँ तपाईँले विभिन्न परीक्षण मार्फत जान सक्नुहुन्छ। एक भन्दा उपयोगी को - परीक्षण जडान गति।
Anonymizing नेटवर्क धेरै। तिनीहरूले स्थिर ठेगाना को धारकों रूपमा, उपयोगी हुन, र यो गतिशील छ गर्नेहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। आईपी गतिशील बनाउन कसरी प्रश्न कहिलेकाहीं पूर्वनिर्धारित आफैमा ती पनि जो आश्चर्य भन्ने तथ्यलाई। ग्राहक गर्न ठेगाना प्रदान गर्दछ बस इन्टरनेट प्रदायक, यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ, र परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यो हो, ठेगाना केही समय नै रहन सक्छ। केही प्रोक्सी परिवर्तन गरेर यो अवस्था बाहिर प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तर anonymizer - एक थप सुविधाजनक विधि।
केही anonymizer भुक्तानी। यी सेवाहरू तपाईं प्रतिबन्धित गरिएको छ जो सामाजिक सञ्जाल, को पृष्ठ जान अनुमति दिन्छ। तिनीहरूले एसएमएस मार्फत केही मात्रामा लिन - सन्देशहरू। यस मामला मा भुक्तानी गरेको छ वा सत्र को अवधि, वा केही समयको लागि। यस्तो सेवा द्वारा दुरुपयोग हुनु हुँदैन, तपाईं अझ राम्रो र बिल्कुल मुक्त पाउन सक्नुहुन्छ। र अझ राम्रो - प्रतिबन्ध भित्र छैन। गतिशील ठेगाना अक्सर इच्छुक clickers र स्पामरहरूको छन्। नम्बर परिवर्तन shamelessly तिनीहरूलाई अनुमति दिन्छ र पछि सजाय स्पैमिंग र गलत क्लिक लागि पैसा प्राप्त।
तपाईं के मल्टिमिडिया प्रविधि थाहा छ?
मिडी-किबोर्ड - प्रयोग र प्रमुख सुविधाहरू को क्षेत्र
Porcine कलेजो व्यञ्जन।
Noiseless कोडिंग: यो सबै कसरी सुरु भयो?
घर स्वादिष्ट छ र स्वाभाविक कसरी बदाम मक्खन बनाउने?
कम अम्लता संग gastritis को मुख्य लक्षण
रेस्टुरेन्ट "साम्राज्य" टुला: समीक्षा र फोटो
कार मा सबै भन्दा राम्रो संगीत - यो सबैको छ
घरको छेउमा कसरी धुलो धुने:2तरिका